यी सडकहरु व्यष्त छन् होस गर्नु होला ? | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
यी सडकहरु व्यष्त छन् होस गर्नु होला ?
काठमाडौं । दुईदिने औपचारिक नेपाल भ्रमणका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शुक्रबार नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन्। २८ गते भारतिय सेनाको हेलिकोप्टरवाट जनकपुर ओर्लन लागेका मोदी जनकपुर दर्शन गरी काठमाडौं आउनेछन्। यस पटक मोदीको भ्रमणमा क्रममा सर्वसाधारणले सडकमा धेरै सास्ती भोग्नुपर्ने भएको छ।
यसपटक जनकपुर, मुक्तिनाथ दर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको त्यस ठाँउको वासिन्दाले पनि सास्ती भोग्नुपर्ने भएको छ । काठमाडौंको लागि बौद्धस्थित हायात होटलमा बस्ने भएकाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट होटलसम्म पुग्दा करिब एक घन्टा बाटो खाली गराउने सुरक्षा योजना बनेको छ।
हायत जाने समयमा गौशला, चावहिल, चुच्चेपट्टी ती रुटमा चल्ने सवारीसाधन पूर्ण रुपमा प्रभावित हुनेछन्। टुँडिखेलस्थित सैनिक मञ्चमा ‘गार्ड अफ अनर’ को लागि निस्कनेछन् । राष्ट्रियसभा गृहमा उनको नागरिक अभिनन्दन र सम्बोधन कार्यक्रम छ।
त्यस अवधिमा भृकुटीमण्डपको सडक मात्र नभई रत्नपार्कबाट भद्रकालीतर्फको सडक पनि खाली गराउने तयारी छ। गार्ड अफ अनर दिने अवधिमा पनि टुँडिखेल आसपास सडक खाली गराइने ट्राफिक प्रहरीको तयारी छ।
टुँडिखेल आउने समयमा चावहिल, गौशला, एयरपोर्ट,तिनकुने, नयाँबानेश्वर,बहरमहल एनएसी हुँदै आउने हुनाले त्यस क्षेत्रको सडक पनि अवरुद्ध हुनेछ । यसअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विशिष्ट कक्षमै गार्ड अफ अनर दिने परम्परा रहेको थियो।
भोलिपल्ट बिहानै उनी मुक्तिनाथ दर्शनका लागि विमानस्थलबाट हेलिकप्टरमार्फत मुस्ताङ जाने कार्यक्रम छ। त्यो अवधिमा पनि सडक खाली हुनेछ। त्यसपछि काठमाडौँ फर्केपछि उहाँ भारतीय राजदूतले आयोजना गरेको दिवा भोजमा सहभागी भई अपराह्न २ः४५ बजे कामपाले आयोजना गर्ने नागरिक अभिनन्दनमा सहभागी हुने समय तालिका छ ।
मोदीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तथा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई भेट्ने कार्यक्रम अनुसार उनी शीतलनिवास जानेछन्। त्यस अवधिमा सर्वसाधारणले थप सास्ती भोग्नेछन्। उनको राजनीतिक भेटघाट द्वारिकाज होटलमा हुनेछ। सो अवधिमा होटलको सडकखण्ड बन्द गर्न लागिएको छ। स्वदेश फर्कने क्रममा पनि विमानस्थलसम्मको बाटो करिब एक घन्टा खाली गराइँदा काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बन्नेछ।
यो पनि पढ्नुहोस निजी इन्जिनियरिङ कलेजविरुद्ध विद्यार्थीको प्रदर्शन
मुक्तिनाथमा दुई दिन दर्शन र पदमार्ग बन्द
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मुक्तिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्न जाने भएपछि दुई दिनका लागि आम भक्तजनले दर्शन गर्न नपाउने भएका छन् । स्थानीय प्रशासनले वैशाख २८ र २९ गते भक्तजनका लागि मुक्तिनाथ मन्दिरमा पूजाआजा गर्न रोक लगाएको छ भने आन्तरिक तथा विदेशी पदयात्रीलाई पनि वैशाख २८ र २९ गते थोरङ्ला पास गर्न रोक लगाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक सूचना नै प्रकासित गरि सो रोक लगाएको छ ।
मोदी वैशाख २९ गते पूजाआजाका लागि मुक्तिनाथ मन्दिर जाँदैछन् । मोदीको स्वास्थ्यमा समस्या आए उपचारका लागि मन्दिर नजिकै सघन उपचार कक्ष (आइसियू) पनि स्थापना गरिएको छ । जिल्ला अस्पतालका चिकित्सकका साथै वीर अस्पताल र भारतीय चिकित्सकसमेतको संयुक्त टोली आइसियू कक्षमा हुने जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको छ ।
मन्दिर नजिकै चार वटा हेलिप्याड बनाइएको छ । मोदी भ्रमणकै तयारीका क्रममा दुई वटा हेलिप्याड बनाइएको हो भने दुई वटा हेलिप्याड पहिलेदेखि नै संचालनमा थिए । मोदीको सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र भारतीय सुरक्षाकर्मी खटिने छन् । मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी जोमसोम सडक तीन दिनका लागि खुल्ला गरिने भएको छ ।
२८,बैशाख.२०७५,शुक्रबार ०८:१८ मा प्रकाशित
← केपी र कृष्णेको कथा
मेरा सबै प्रेमी, जो मेरा स्तनको तारिफ गरेर कहिल्यै थाकेन →